UTiffany Haddish uxelwe njengoyintandokazi yokuthatha ingubo ku-Ellen - Inkcubeko Yopopu
UTiffany Haddish uxelwe ukuba uyintandokazi yokuthatha indawo emva ko-Ellen DeGeneres ukuphuma kuMdlalo wakhe wexesha lasemini
U-Tiffany Haddish uxelwe ukuba ngoyena mntu othanda ukuthatha i-TV mantlelong yasemini ehlala u-Ellen DeGeneres.
UTiffany uyintandokazi, unoburharha kunye novelwano kwi-spades, umthombo omkhulu we-NBCUniversal uxelelwe Iphepha lesithandathu Shes phezulu kuluhlu ukuze ufumane umboniso wasemini- ulilizwi elitsha.
ilitye elithobekileyo lokuthetha nge-nicki minaj
Ukuba iHaddish iyayithatha ingubo, kubonakala ngathi iya kuba kwifomathi eyahlukileyo.
Njengoko sityhile NgoFebruwari, u-DeGeneres unamalungelo kumdlalo wakhe, odityanisiweyo kwaye uveliswe nguWarner Bros. ke akunakwenzeka ukuba umthathe indawo yakhe ngaphandle kokumisela ifomathi entsha nomninimzi omtsha, Iphepha lesithandathu babhale kwingxelo yabo.
Umamkeli-ndwendwe olundwendwe oluHaddish uqhubeke Umboniso we-Ellen DeGeneres Ngo-Okthobha emva kweengxelo zommandla onetyhefu kwindawo yokusebenza zakhokelela ekugxothweni kwabavelisi abaphezulu uEd Glavin noKevin Leman, kunye nomvelisi ophetheyo u-Jonathan Norman. La madoda mathathu atyholwa ngabasebenzi bangaphambili kunye nabangoku bokuziphatha gwenxa ngokwesini kunye nokuhlukumeza, ukongeza ekuvuseleleni ubuhlanga, uloyiko kunye nokoyikisa.
UDeGeneres wajongana nezityholo okokuqala xa ebuyela kumdlalo wakhe ngoSeptemba. IHaddish yavela kwakweso siqendu sinye kwaye wavakalisa inkxaso yakhe ku-Ellen. Umhlekisi kunye nomlingisi ugcwalise njengondwendwe okwesithathu kwinyanga ephelileyo.
I-Haddishhas ikwanika imbeko kubuchule bayo bokubamba kwimvuselelo ye-CBS Abantwana bathetha ezona zinto zibalaseleyo .
UDeGeneres uqinisekisile kudliwanondlebe kunye Intatheli yaseHollywood ukuba i-19thIxesha lomboniso wentetho yakhe emini iya kuba yeyokugqibela. Xa ungumntu oyilayo, uhlala ufuna umceli mngeni- kwaye umkhulu njengalo mboniso, kwaye umnandi njengoko unjalo, awungomceli mngeni kwakhona, ucacisile.
UDeGeneres kamva uxelele abaphulaphuli ngexesha lesiqendu sangoLwesithathu ukuba umvumele ukuba enze ukuthanda kwakhe ngexesha elifanelekileyo.
Unokuzibuza ukuba kutheni ndigqibe kwelokuba ndiyeke emva kwamaxesha e-19. Inyani yile, ndihlala ndiyithemba ithuku lam, wachaza. Ithuku lam landixelela ixesha lalo. Njengomntu ohlekisayo, bendihlala ndiqonda ukubaluleka… kwexesha. Kuzo zonke izinto ezinzima, ndiziva ngathi ixesha elizayo yayilixesha elifanelekileyo lokuphelisa esi sahluko simangalisayo.
ungangeni kwindlu yokrebe
U-Ellen uthe wazise abasebenzi ngesigqibo sakhe ngoLwesibini. Iphepha lesithandathu ixelwe NgoJanuwari abaphathi beMifanekiso, inkampani yokuvelisa ngasemva Ngokuchasene , babesazi ukuba uDeGeneres, owayeshiye unyaka omnye kwisivumelwano sakhe, wayefuna ukuhamba, kodwa bakhetha ukuba unokufumana enye indawo, ukuze babambelele kwixesha lakhe langoku.
Iphepha lesithandathu nalo ixelwe ukuba kubonakala kuthandwa kakhulu UKelly Clarkson Show primed ukuthatha Ellens inkanuko 3:00 pm ixesha slot.
Eyona mpahla yomkhosi womoya 1
I-lamar odom kunye nebali le-khloe kardashian
ubizwa njani umngxunya kwimbethi manqindi yamadoda
iresiphi yevanilla emanzi enamafutha